Kenya oo lacag dhaafsatay in dalkeeda lagu maxkamadeeyo Burcad badeedda Somalida. [Akhris …] – Radio Daljir
Kenya oo lacag dhaafsatay in dalkeeda lagu maxkamadeeyo Burcad badeedda Somalida. [Akhris …]
Nairobi, Aug 28 – Dawladda Keenya ayaa ayaa lacag dhaafsatay in dalkeeda lagu maxkamadeeyo Burcadbadeedda Somalida ee ay qabtaan ciidamada shisheeye ee ku sugan xeebaha dalka Somaliya, arrintaan oo ah mid muddo laga fakarayey.
Dawladaha Mareykanka, Ingiriiska iyo Midawga Yurub ayaa hay?ado gaar ah u xilsaaray inay heshiis noocaas la galaan dawladda Kenya, si xal loogu helo dhibaatada ciidamada jooga xeebaha soomaaliya ka haysata Burcadda ay qabtaan oo ay waayaan meel ay geeyaan ayna muddo ku qaadato inay maraakiibta ku dul hayaan.
Qorshahaan dalka Keenya looga iibinayo in burcadda badaha ee Somalida ah lagu maxkamadeeyo dalkeeda oo hadda la isku afgartay ayaa haddii uu hirgalo waxaa uu oof weyn ka fujiyanaa dalalka ay ciidamadu ka joogaan Somaliya.
Boqolaal dhallinyaro Soomaali ah oo ku eedeysan falal burcadnimo ah ayaa ku xiran xabsiyada dalka Keenya, kuwaasi oo laga deyrinayo xaaladooda caafimaad iyo guud ahaan noloshooda, iayadoo hay?adaha u dooda xuquuqda aadanaha ay dawladda Keenya ku cadaadinayaan inay u ogolaato inay la kulmaan maxaabiistaasi.
Qaar ka mid ah maxaabiista ayaa la sheegayaa inay aad u xanuunsanayaan qaarkoodna uu ku yaallo dhawacyo ka soo gaaray xilliigii la soo qabanayey iyo xittaa kuwa wali xabado ku jiraan.
Dawladda Keenya ayaa lacagta loo ballanqaaday inteeda badan waxaa wax looga qaban doonaa dhinacyada sharciga oo Kenya ay aad ugu liidato iyo wax ka qabashada dayaca xabsiyada dalkaasi oo maraya meel aad u xun siiba xabsiga magaalo xeebeedka Mambaasa oo ay ku jiraan in ka badan boqol Somali ah oo ku eedeysan fala Burcadbadeednimo.